Aqoonkaab Ka digtonow arimahan ka hor intanad guri yagleelin | Aqoonkaab
Ka digtonow arimahan ka hor intanad guri yagleelin
Jul 19, 2015Arrimaha bulshada
qoysku wa unugga iyo seeska ay ledahay bulsho kasta, wuxu matala kana turjuma hab nololeedka bulsho iyo qiyamkeeda.
wa humaag aad ka dhehan kartid xaladay ku sugantahay bulsho kana qiyaaas qadan kartid kala danbeenta ,ismaqalka is fahanka iyo isku tirsanaanta umaddi ledahay.
Aabe , hooyo iyo caruur hadii intasi samaato waxa kasoo baxaya bulshada shakhsiyad dhisan leh .
Aabaha waajibkisa gudatay guriga wa mid gudanaye waajibadkii alle dul saray, wajibaka dadkiisa iyo dalkisa hoyaduna si taa la mid waxayna soo saran caruur talabadooda qaadaysa ilee awrba awrka ka roreyu socodkisa leeyahee.
Burburka ku dhacay qoysaska somaliyeed waxaynu ka dhaxalnay
Aabe shaqadisi gabay ,hooyo teedina ka baxday tii aabahana gadhin iyo caruur ku dhex luntay gabidii wajibaadka labada sare waa aabiyo iyo hooyo.
Dhibatadani wa mid silsilada ilmahan helin xaqii uu ku laha aabihi iyo hooyadi isna ma aha mid siinaya ilmihisa ama ilmaheda xaqay ku lahayen ileen mabay arkin iyagubu si kastaba ha ahate hadii xanuunka la ogaado dawada waa la helaba la yirahda ee halkay sartu ka qudhuntay qodobadan iyo kuwa kalo badan oo an halkan ku xusneyn waxay sabab uyihin burburka ku yimaada qoysaska somaliyeed
1.Qorshe laa’aanta da’yartena :-in guri la unkaa wa masuuliyada weyn waxay ubahantahay taxadir iyo ka fiirsasho badan ma ahan kaliyata inad noqon kartid xaas wanaagsan ama nin wanaagsan balse wey ka baladhantahay kana mug weyn
tahay intaadan go’aanka guur ka hor qadan suaalahan isku dayn inaay ka jawaabto 1. masuuliyadii aabe iyo hoyonimo ma qadi kartaa ? 2. ma leedahay dabeecada iyo hab dhaqankaad ula macamili kartid qoyska cusub ee lamanahaga sodohdaa , sodogaa,dumashida iyo hadi ay jirto dangaldaduba waayo bulshadeena reerbaa reer guursada taaso ka gadisan dhaqanka reer galbeedka .
2.Dulqaad la’aanta dadkeena :- nolol bilaa dhibata caqabadana lahayn oo dunidan aad aragto waxa lagu arkaaa bas riyooyinka. nolosha guurku wa mid ka gadisan taad hore gurigii aabaha iyo hooyada kula nooleyd waxay ubahantahay dulqaad iyo xamilaaad dhibatada kaga imanaysa degaanka cusub .
3.Guurka tirada badan ee ragga:- waxaynu nahay bulsho boqolkiba boqol muslima waxana alle ubaneeyey afar dumar ragga si kasto ay ahataba waxaynu dhafsanahay shardigii loo dhigay oo inaad ucadalad samayso waxanad arkaysaaa aqalada somalidu iney dhinac ujanjeedhan marka laga reebo kuwa fara tirisa ,cadalad darada raggu waxay keentay furniinka oo bata taaso sabab u ah burbur qoys oo laxaaad leh iyo dayacnaanta guryo badan oo ay raggu kala bakhayleen dhaqaale iyo dhaqashaba.
4.salfudeedka dumarka :- guri dhisan in la dumiyaa wa xalasha alle ugu neceb yahay talaaba aad qaadidna iney uhorseeedo ma ficna hoyoyinku wa iney ka taxadiraan duminta guryohodu una tudhaan caruurtoodu markastana ka racan wanaaga , waxaad ka heli weydid caruurtaada aabahood alle ayaa meel kale ka siin, badana bulshadeena inta gabadh ay qoyska ninkeedu tabantaabiyaan iyadoo weliba abaal merintii allena u maqan tahay.
si aynu uhelno qoys taaba qada isla markaa sawir wacan ka bixiya bulshadeena Aabo iyo hooya kastaba wa inay soo tarbiyadeeyaan aabaha iyo hooyada mustaqbalka dhaw kuna dadalan iney unoqdaan tusaale wacan caruurtoda.
xaquuqda : bahda aqoonkaab
Previous Post6 qodob oo ku damanad qadaya lafa wanaagsan Next Post4 qodob oo aad taajir ku noqon kartid